Commissioning of Nick and Kyndra Moore and Matt Beard for a Mission Trip to Zimbabwe.
from Redemption Hill Baptist Church
Added 3 years ago 67 0 0 At our latest Member's Meeting, Sam Mhlanga prays for Pastor Nick and Kyndra and Matt Beard in English and his native tongues of Shona and Ndebele. + More details
2013 SA Livingstone-Vic Falls-Zimbabwe-Zambia mp4
Added 3 years ago 14 0 0 Part 3 of our trip to Southern Africa that includes the Thorntree lodge and the Mfuwe lodge. The highlights included the Victoria Falls, the night game drive with the leopards, and the visit of Peter's… + More details
Added 3 years ago Sweetest Voice in Zimbabwe . Newton Gwara ( Matemai ) playing Shanda Ugarike ( work Hard ) at his home in chitungwiza , Zimbabwe Jan 2013 . All donations from the ''tip jar'' below… + More details
Added 3 years ago 64 0 0 Arcadia lake in Zimbabwe + More details
Added 3 years ago 0 0 0 Rent $1.99 The AIDS epidemic that came to light in the 1980s still rages today across Africa, killing 1.4 million people and infecting another 1.9 million in 2008 alone.
The disease does not discriminate,… + More details
from Benjamin Baxter
Added 3 years ago 66 1 0 MANISA is an annual arts festival held in Mutare, Zimbabwe. In order to explore the art scene in Mutare I contacted 3 local artists and asked them for interviews. + More details
Added 3 years ago 155 0 0 The 2013 Zimbabwe elections were unilaterally proclaimed by President Robert Mugabe on June 13th. The proclamation was in contravention of both the new constitution and the Global Political Agreement… + More details
from Les Oizeaux de Passage
Added 3 years ago 10 0 0 Artisanat solidaire en métal recyclé du Zimbabwe - www.lesoizeauxdepassage.fr + More details
from Gillian Leahy
Added 3 years ago 147 3 0 Buy $8.00 The Chikukwa Project is a good news story out of Africa. For the last 20 years an incredible permaculture project has been growing in Zimbabwe. Where once the people of the Chilkukwa villages suffered… + More details
Zimbabwe The Wheels On The Bus